Nchịkọta Ihe Omume Ntanetị Ntanetị Njirimara Platform ma ọ bụ Asọmpi? | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 26, 2017 Tọzdee, Ọktoba 26, 2017 Douglas Karr
Otu enyi m gwara m ka m nyochaa nyiwe ha na saịtị ndekọ aha ndị ọzọ n'izu a, na-ekwu na saịtị ahụ na-ebufe ndị ahịa ndị ọzọ nọ na ụlọ ọrụ ahụ ntakịrị. Emere m nyocha ngwa ngwa na saịtị ndekọ ahụ ma ọ bụ eziokwu, ha enwetala ọkwa siri ike na ụlọ ọrụ enyi m. Ọ dị ka naanị ihe ezi uche dị na ha kwesịrị ịrịọ nyocha iji nweta ọhụhụ ka mma na ndekọ ahụ.
Akwụkwọ ndekọ a abụghị obere saịtị, ọ buru ibu. Ọ nwere nnukwu nyocha engine, ndị ọrụ mmepe, itinye aka na mgbasa ozi mgbasa ozi, yana ọbụlagodi mgbasa ozi akwụ ụgwọ. Ebe ọ bụ na okporo ụzọ ya dị oke njọ ma ọ nwere ike ịkwanye ọtụtụ ndị na-ekiri ya dị mkpa na nyiwe, ọ nwekwara sistemụ mgbasa ozi akwụ ụgwọ n'ime ebe enyi m nwere ike ịzụta profaịlụ pụtara ìhè karị ma ọ bụ gosipụta mgbasa ozi na ibe dị mkpa.
Gịnị bụ atụmanya njem?
Edere ndekọ ahụ na engines ọchụchọ maka mkpụrụokwu dị mkpa metụtara na ikpo okwu.
Onye ọrụ nchọta ihe nchọta ahụ na ndekọ ebe ha na-ahụ ebe ikpo okwu gị n'akụkụ asọmpi gị niile.
Ndị ọrụ ole na ole na-enyocha injin ọchụchọ pịa na ụlọ ọrụ gị. Ọtụtụ na-efu gị asọmpi, karịsịa ma ọ bụrụ na ha nwere a ibu mgbasa ozi mmefu ego n'ime ndekọ.
Nke a bụ nsogbu na njem a… ọ bụghị enyi ikpo okwu, ọ bụ onye na-asọ mpi ha. Ikpo okwu na-egbochi atụmanya gị, na-eme ka ha gaa na saịtị ha, ka ndị na-ege ntị wee nwee ego n'ebe ahụ. Promote na-akwalite ndekọ na ndị ọrụ gị itinye nyocha - nke ha na-eme - nke na-eme ka ogo ọchụchọ ahụ ka mma. Kedu oge, ọ na - agbanye onwe gị miri n'etiti gị na atụmanya gị. Ugbu a ị dabere na akwụkwọ ndekọ aha gị iji zụọ ahịa gị.
Na-ewu ọnụnọ dị n'ịntanetị siri ike, ogo ka mma karịa ndekọ ahụ.
Atụmanya na-eleghara ndekọ anya ma gaa ozugbo na ọdịnaya gị, enyebeghị asọmpi ahụ.
Ọdịnaya gị dị mkpa, nke na-adọrọ adọrọ na-adọta onye ọbịa ka ọ bụrụ onye ndu, na-eduga onye ahịa.
Akwụkwọ ndekọ aha ahụ enweghị ezigbo ohere ịkụ gị ihe na nsonaazụ ọchụchọ gị karịa ka ị na-eme, gịnị kpatara ị ga-eji nyere ha aka? Kedu ihe kpatara ị ga-eji kwụọ ha ụgwọ, kwado saịtị ha, ma ka ọ dị ugbu a, ha na-enyere ndị asọmpi gị aka? Ọ ga-adị ka onye guzo n'ihu ụlọ ahịa gị, na-agagharị na atụmanya gburugburu ebe nchekwa ahụ nye ndị asọmpi gị, wee rịọ gị ka ị kwụọ ha iji hụ na ha kpọghachitere gị n'ụlọ ahịa gị. Ga-agbapụ ha n'ọnụ ụzọ gị, nri?
Ikwesiri ileba anya na ihe omuma o bula dika enyi na onye ndoro-ndoro ochichi. N'ezie, ha nwere ike ịnwe ohere ịbugharị gị. Ma ọ bụ ụgwọ gị. Ikwesiri ikpebi ma ị dị mma na ịdabere na ntụkwasị obi ahụ ma dị njikere ịnọgide na-akwụ ụgwọ maka nnweta ha ndị na-ege ntị.
Agaghị m. Edeghi m nyocha a maka ikpo okwu enyi m.
Tags: ndebanye ahaakwụkwọ ndekọ aha ntanetị n'ịntanetịonline saas ndekọusoro ikpo okwuakwụkwọ ndekọ ngwanrọ